TripIt: ခရီးသွားအစီအစဉျ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျီပီအက်စ် & ခရီးသွား Apps ကပ » TripIt: ခရီးသွားအစီအစဉျ
TripIt: ခရီးသွား Planner က APK ကို
ဒါဟာသင့်ရဲ့ပျှမ်းမျှခရီးသွား App ကိုမဟုတ်ပါဘူး။ အရာအားလုံးတို့အတွက်တစ်နေရာတည်းစစ်ဆေးနေ, သူတို့ဖြစ်ပျက်မတိုင်မီအမှုအရာအကြောင်းကို သိ. ဆိုပါစို့။ TripIt မရှိဘဲဘဝကိုခရီးသွားများအတွက်သန်းပေါင်းများစွာတို့အတွက်ဝေးသောမှတ်ဉာဏ်သည်အဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုပါ။
သငျသညျစာအုပ်ကိုငျတှယျ, ကျနော်တို့ရှိပါတယ် မှစ. ဒါဟာယူပါလိမ့်မယ်
သငျသညျစာအုပ်ဆိုင်ဘယ်မှာအခြားအက်ပ်မတူဘဲ, ကအရေးမထားဘူး။ TripIt ကအားလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ အဖြစ်မကြာမီသင်တစ်ဦးလေယာဉ်, ဟိုတယ်, မော်တော်ကားသို့မဟုတ်အခြားကြိုတင်မှာကြားထားစာအုပ်ဆိုင်အဖြစ်ရိုးရှင်းစွာ plans@tripit.com က forward နဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းသင်၏သခင်ခရီးစဉ်စီစဉ် add ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခုကလက်ငင်းမှာတော့သင့်ရဲ့အစီအမံ Access ကိုထိုအမျှဝေပါ
အဘယ်သူမျှမကပိုအသညျးအအရေးကြီးသောသင်တို့ပြေးအတွက်ရရှိသွားတဲ့သည့်အခါများကဲ့သို့အသေးစိတ်သို့မဟုတ်သင့်အတည်ပြုချက်ကိုအရေအတွက်ကိုအဘို့သင့်စာပုံးမှတဆင့်ရှာဖွေ။ သငျသညျအော့ဖ်လိုင်းနေလျှင်ပင်, TripIt အတွက်ချက်ချင်းသူတို့ကိုရယူပါ။ Plus အား, ငါတို့ကလွယ်ကူသင့်ရဲ့ပြက္ခဒိန်, ဒါမှမဟုတ်သင်ရွေးချယ်မည်သူမဆိုမှခရီးသွားအစီအစဉ်များကိုပေးပို့ဖို့ပါစေ။
TripIt နှင့်အတူအခမဲ့အဘို့, သို့မဟုတ်သင့်အိတ်စစ်ဆေးနေ၏စျေးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကိုသင်၏အကြံအစည်များကိုစီမံကွပ်ကဲအပေါင်းတို့, တစ်နှစ်ကြာမြင့်စွာစိတ်ဖိစီးမှု-အခမဲ့ခရီးသွားရဖို့ TripIt Pro ကိုမှ upgrade ။
သငျသညျ upgrade အခါ, TripIt Pro ကိုသင်တို့အဘို့ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပွုပါမညျ (နှင့်ပိုပြီး!):
• Real-time ပျံသန်းသတိပေးချက်များပေးပို့ပါ
•အပြန်အလှန်လေဆိပ်နှင့် terminal ကိုမြေပုံများအားပေး
• terminal ကိုများနှင့်တံခါးဝသတိပေးချက်များပေးပို့ပါ
ပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့, TripIt အသုံးပြုသူသဘောတူညီချက် (https://www.tripit.com/uhp/userAgreement) နှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ (https://www.tripit.com/uhp/privacyPolicy) ကိုကြည့်ပါ။
• TripIt Pro ကိုအသုံးပြုသူများသည်အတွက်, ဒီဇိုင်း Pro ကို tab ကိုသငျသညျကိုဝင်ရောက်နှငျ့သငျမှရရှိနိုင်ပါအင်္ဂါရပ်အားလုံးအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူကူညီပေးသည်။ အဆိုပါ Pro ကို tab ကိုမှ, အပြန်အလှန်လေဆိပ်မြေပုံရှာလေဆိပ်အဘို့ချန်ခြွင်းမှအခါသင်သတိပေးအခုတော့ Go ကိုသက်ဝင်စေ, မဆိုတိုင်းပြည်အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသွား tools တွေကိုစူးစမ်းလေ့လာ, Tracker ထောက်ပြဆုလာဘ်အစီအစဉ်များကို add နှင့်အခြား features တွေရယူသုံးပါ။
•ကျနော်တို့အနေနဲ့တပ်လှန့်ခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုတည်နေရာအမည်များကိုပြသကြသည်မဟုတ်ရှိရာတဦးတည်းအပေါ်နှိပ်တဲ့အခါမှာ app ကို crash စေတနဲ့တူ bug တွေတစည်း fixed ။
27.77 ကို MB
အဆိုပါလေတပ်အတွက် App ကို - ...